Ady amin'ny famotsiam-bola
Fahitan'ny manampahaizana vahiny ny zava-misy
Votez TOP GASY
(21/03 - 19/04) Adaoro
(21/05 - 20/06) Asorotany
(23/07 - 22/08) Asombola
(23/09 - 22/10) Alakarabo
(22/11 - 21/12) Adijady
(20/01 - 18/02) Alohotsy
VAOVAO ON LINE
Vaovao du 21-07-2017 17:30
Vaovao du 20-07-2017 17:30
Vaovao du 19-07-2017 17:30
Vaovao du 18-07-2017 17:30
Vaovao du 14-07-2017 17:30
Derosse Feat Rita
HO AN ATOA FILOHA
BEAT BOX N° 4
BEAT BOX N° 3
Voix Talen’Est (18-12-16)
VOIX TELEN’EST (11-12-16)
Afaka mamokatra herinaratra 38 Megawatts ny JIRAMA Toamasina raha 25 Megawatts ny filana eto an-tanana (04-10-16)
Fanamboarana sy fanarenana ireo fotodrafitr’asa, faritra Analanjorofo (04-10-16)
Lalam-pirenena faha roa (30-09-16)
Centre Vonjy (30-09-16)
Fanalo ny Anosy (24-08-16)
15eme anniversaire du cours d’appel Toamasina (19-08-16)
DREN Atsinanana (09-08-16)
1956-2016: 60 taona nisian’ny CNaPS (03-08-16)
Tsy misy marika ny mpanao ratsy (02-08-16)
Hay trano tao Dépot, Toamasina
Trano 10 tafo mahery, kilan’ny afo anaty 30 minitra
Nohon’ny haitrano nitranga tao Dépot, parcelle 23/41 sy 23/42, ny alarobia, sahabo, tamin’ny 4 ora sasany tolakadro, tonga namangy ny fianakavina tratran’ny haitrano Solombavambahoaka voafidy teto Toamasina I, Atoa FAMINDRA Justin sy ny Vadiny, nitondra famapaherezana sy fanampiana. Nanao fanentanana ko aizy amin’ny manampahefana sy tompinandraikitra eto antoerana fa tsy hijery fotsy ireo vahoaka tratran’ny hai-trano izao fa ny fifanampiana sy fifanomezan-tanana no ahafahana manarina ny fahapotehana.
JoelK : 17-08-2018 - 15:15 ... Lire la suite
Hotomobana araka ny tokony ho izy ve?
Fifidianana io no lohahevitra niarahana tamin’ny fandaharana Miray Feo ho an’ny fiarahamonina mirindra tamin’ny onjam-peo Radio Voanio, FM 98.2, ka nanasana an’ny solombavambahoakan’ny Madagasikara voafidy tao Toamasina II Atoa Roilahy Jonah teo ihany koa Atoa Maro Roland, President Commission Electoral - Provincial de Toamasina, ary Rtoa Viviane Rahariniaina avy ao amin’ny Ino Maresaka Tamatave. Nafana ny adihevitra ny mpihaino ihany koa dia niezaka ny naneho ny heviny na tamin’ny alalan’ny 034 44 444 44 na tamin’ny fanehoan-kevitra tamin’ny facebook Voanio Toamasina
Lanto : 16-02-2018 - 09:20 ... Lire la suite
Tontosa ny asabotsy faha 23 desambra ny hetsika izay karakarain’ny Radio Voanio, isan-taona, ny Noelin’Ankizy. Ankizy avy amin’ny sekoly ambaratonga voalohany na EPP miisa enina no nandray anjara tamin’izany. Kilonga miisa 30 avy amin’ny kilasy GS na CP1 no naira-nidola, nihira sy nampiseho talenta.
JL : 28-12-2017 - 08:33 ... Lire la suite
Jeune Chambre International Toamasina
Nanolota ny asa vita tao amin’ny EPP Ambohijafy
Navaozin’ny JCI na ny Jeune Chambre International eto Toamasina indray ny tranom-pianarana 2 efitra etsy amin’ny EPP Ambohijafy, izay fanatsarana niharahan’izy ireo niaraka tamin’ ny ZAZASOA, izay fikambanan’ny mpianatra any Frantsa mpiara-miasa efa ela amin’ny JCI eto Toamasina. Efa nisy ny fanavaozana ny tranom-pianarana efitra roa ny taona 2016
R Prud'Homme : 12-07-2017 - 15:12 ... Lire la suite
Lanonana roa sosona no notanterahina teto amin’ny Radio Voanio ny farany herinandro lasa teo, ny 23 desambra dia nankalaza ny noelin’ny ankizy, ny 24 desambra kosa dia mbola notanterahana tato amin’ny hefitrano malalaky ny Radio Voanio ny fifaninanan-kira Voix Talen’Est manasa-dalana.
Maro ireo mpijery no tonga, fa indrindra ireo nanotrona sy nanohana ireto...
Lantomalala : 26-12-2016 - 11:05 ... Lire la suite
© 2013-2014 - Designed by Pro Media Consulting © 2011